FILOHAN’NY MPIARO NY ZON’NY MPANJIFA TOAMASINA : Nandroso tolo-kevitra ho an’ny Jirama
Samy mandrimandry manana aretina na ny mpanjifa na ireo mpanome tolotra.Ny tolakandron’ny zoma 21 jolay lasa teo, nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety tao Toamasina ny filohan’ny tambajotram-paritany miaro ny zon’ny mpanjifa ao Toamasiana ( Rpdc), Jean René Andriamihaja. 24 juillet 2017
Ity farany izay sady masoivohon’ny tambajotra nasionalin’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa na Rndc. Nandritra ny valan-dresaka nataony tao amin’ny Hotely Le Bateau Ivre no nilazany fa mihaino ny fitarainan’ny mpanjifa ao Toamasina ny tenany ary mampiakatra izany taraina izany amin’ireo sehatra voakasika sady manaraka akaiky ny tohiny hatramin’ny fivoahan’ny vahaolana.
Mahakasika ny fahataran’ny fampidirina jiro sy rano, dia nisy ny fihaonany tamin’ny Tale iraisam-paritry ny Jirama Toamasina. Nisy ny fandrosoan’ny Rpdc soson-kevitra entina hamahana ny olana. Tokony homena fahefana misimisy ireo sampan’ny Jirama aty amin’ny faritra. Tsy tokony mila mandefa fangatahana any amin’ny tale jeneralin’ny Jirama Antananarivo fa afaka mividy kojakoja na filàna madinidinika an’ny Jirama aty amin’ny faritra.
Tokony havela mividy kaonteran-jiro sy rano amin’ny sehatra tsy miankina koa ireo tokantrano hampiditra izany, ka ny Jirama avy eo no mametaka izany sy mifanaraka amin’ny mpanjifa. Samy mahazo tombontsoa amin’io na ny Jirama na isika mpanjifa. Notsipihiny mazava kosa fa tokony hifanaraka amin’ny vidin’ny famokarana herinaratra ny vidin-jiro atolotry ny Jirama. Notsiahiviny fa angovo karazany roa no mamatsy an’i Toamasina : angovo azo avy amin’ny solika (thermique) sy angovo azo avy amin’ny rihan-drano (hydraulique). Tsy mitovy mihitsy ny vola lanin’ny Jirama amin’ireo famokarana karazan’angovo roa ireo, ka tokony hipaka any amin’ny vahoaka ny elanelam-bidy.
Mahakasika ny loton’ny rano ao Toamasina renivohitra izay mateti-pitranga. Misy ny antso avo ataon’ny Rpdc amin’ireo tompon’andraikitra manana adidy amin’ny fanomezana rano fisotro madio ny vahoaka sy ny fahasalamam-bahoaka, dia ny minisiteran’ny Rano, minisiteran’ny Tontolo iainana, minisiteran’ny Fahasalamana, minisiteran’ny Angovo. Mila soloina ireo fantsona mitondra rano ao Toamasina. Fantson-drano napetraky ny vazaha mpanjanatany tamin’ny taona 1929 no mbola miasa ao Toamasina, antitra sy tsy maharaka ny filàn’ny mponina intsony izany, raha ny nambarany hatrany.
Voaresaka nandritra izao fihaonan’ny filohan’ny tambajotra miaro ny zon’ny mpanjifa ao anatin’ny faritanin’i Toamasina izao koa ny lafiny fampianarana. Nambarany fa mpanjifa fahalalana ny mpianatra ka zony ny mahazo tolotra tsara mampahay sy mampandroso. Miharatsy anefa ny voka-panadinana tato ho ato, ka ilaina ny famahana izany olana izany mba tsy ho taranaka bado ireo fara-aman-dimby.
Nomarihiny filohan’ny Rpdc fa samy mpanjifa avokoa ny olana rehetra ka mila miady ny zony. Momba ireo varotra hani-masaka amoron-dalana izay maro no tsy ara-pahasalamana, dia nanao famoha mandry ho an’ireo mpivarotra ireo ny tenany mba hampifanaraka ny sakafo amidiny amin’ny fenitra ara-pahasalamana tsy mamparary mpanjifa.
Momba ny filazan’ny tompon’andrikitra ambony iray ao amin’ny Kaominina Toamasina fa « vitan’ny Kaominina samirery ny fanadiovana ny tanànan’i Toamasina », dia tsy mitombina velively izany. Samy mpanjifa ny rehetra ka manana adidy avokoa amin’ny zony sy andraikitra tandrify azy avy. Natsidiky ny filohan’ny Rpdc Toamasina sahady nandritra io fihaonany tamin’ny mpanao gazety ny zoma 21 jolay io ny hisian’ny dinika fifanalozan-kevitra entina iahiana, itandrovana ny fiaraha-monina sy ny fanjifana ao Toamasina. Dinika izay hatao amin’ny volana septambra izao. Samy mandrimandry manana aretina na ny mpanjifa na ireo mpanome tolotra, ilaina ny fisian’ny fihaonana tahaka izao atao izao.
Farany, mitaky ny famoahana didim-panjakana mampihatra ilay lalàna laharana 2015-014 ny Rpdc Toamasina. Lalana izay miantoka ny zon’ny mpanjifa eto Madagasikara ary efa nolanian’ny Antenimierampirenena.
“Tsy vahaolana ny fidinana an-dalambe” FIKASANA HANONGAM-PANJAKANA, FANAKORONTANA … (333) 14 janvier 2021 Tantsambo nitsabo tena nasaina nandohalika avy eo notifirina FAHADISOANA TOMBANTOMBANA (151) 13 janvier 2021 Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona VOHIDROTRA TOAMASINA II (113) 14 janvier 2021 Nilaza ho tsy tompon’antoka koa ny Fadintseranana FANONDRANANA VOLAMENA 73,5KG (92) 13 janvier 2021 Milaza hanova paikady amin’ny fanakorontanana ny firenena RODOBEN’NY MPANOHITRA (63) 14 janvier 2021 Nahazo ny anjarany mpanodina voankazo sy mpanarato FILOHA ANDRY RAJOELINA (57) 12 janvier 2021